Kuziva sei kana ini ndavharirwa paWhatsApp | IPhone nhau
Ini pachangu, handizvifarire, asi unofanirwa kuzvipira kuuchapupu: WhatsApp ndiyo yakanyanya kushandiswa mameseji kunyorera pasi. Muchokwadi, vanopfuura mumwe muvanhu vasere pasi rose vanoshandisa kunyorera kuri neFacebook, uye izvi ndizvo uye zvichave zviri munyika dzese dzatinobhadhariswa SMS. Ini ndinotaura pane zvekupedzisira nekuti vashandisi, vakadai sefakisi, havabhadhare chero chinhu asi, kusiyana neizvi, maSMS anowanikwa mune yedu foni bhiri.
Asi hei, mune ino post hatisi kuzotaura nezvekuti tingade sei zvinhu zvive, kana zvisiri mumubvunzo une vazhinji vashandisi: sei ziva kana vakativharira paWhatsApp. Muchokwadi, hapana mashiripiti fomula iyo inotizivisa isu zvine chokwadi chekuti takavharirwa paWhatsApp, asi kune zvakati wandei zvinoratidza kuti, zvirinani, zvinogona kutiita kuti tifungire kuti izvi zvanga zviri izvo. Mune ino posvo isu tichataura nezve izvo zviratidzo.
1 Zviratidzo zvinogona kuratidza kuti takavharirwa paWhatsApp
1.1 Zuva rekubatana kwako kwekupedzisira hariratidzike
1.2 Kwete cheki cheki kana cheki bhuruu
1.3 Mufananidzo wepamoyo unonyangarika
2 Hapana nzira inogona kutivimbisa
Zviratidzo zvinogona kuratidza kuti takavharirwa paWhatsApp
Zuva rekubatana kwako kwekupedzisira hariratidzike
Sezvatakambotaura kare, hapana chirevo chinotibvumidza kuve nechokwadi chekuti takavharirwa, saka isu tichafanirwa kuwedzera zviratidzo zvinoverengeka kupedzisa tichifungidzira kuti zvave. Imwe yeaya maratidziro ari kutarisa iyo date iro rinofanira kuoneka pazasi pezita zvekutaurirana kwedu. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kuvhura chat nemunhu watinofunga akativharira uye titarise pasi pezita ravo.
Mukufungidzira, zuva uye nguva yekubatana kwako kwekupedzisira kunofanira kuoneka. Kana pamberi penguva iyo yatinotenda kuti iwe wakativharira zuva racho rakaonekwa uye ikozvino risingaoneke, tinogona kufunga kuti iwe watitadzisa. Asi zvakare Unogona kunge usiri kugovera ruzivo urwu nemumwe munhu, saka hazvigone kuvhunduka kana kutora matanho kana tikasaona kubatana kwako kwekupedzisira.
Kwete cheki cheki kana cheki bhuruu
Tinogona kufunga kuti iko kutadza kweWhatsApp, asi haisi 100% zvakadaro. Kana isu takadzivirirwa, tinogona kutumira mameseji kune uku kutaura, asi isu tichafanirwa kutarisisa kune izvo zvinozivikanwa se "cheki":
Cheki yekutanga inoreva kuti meseji yaendeswa kuWhatsApp, ndiko kuti, kuseva inozoendesa iwo meseji kune vatinosangana navo.
Cheki yechipiri inoreva kuti meseji yaendeswa kune yedu yekutaurirana, asi haasati aiverenga izvozvi.
Cheki chechitatu ndipo painoiswa "V" maviri nebhuruu, zvinoreva kuti meseji yakaverengerwa, chero bedzi kuonana kwedu kusingamise sarudzo iyi kubva pazvirongwa.
Kana isu takadzivirirwa, iyo kuongorora kaviri uye cheki yebhuruu haizoonekwi pane yedu skrini. Pamwe apa ndipo panokundikana WhatsApp, nekuziva iyi data, tinogona kufungidzira kuti takavharirwa. Mune maonero angu, kutibatsira kuti tirege kuzivisa kana takavharira mumwe munhu, cheki yechipiri inofanira kuonekawo, ndiko kuti, ma "Vs" maviri ayo anoratidza kuti meseji yasvika pedu. Nenzira iyi, hatingamboone cheki chebhuruu, icho, mukufunga, chingareva kuti meseji haina kuverengwa asi, kusiyana neakaviri cheki, cheki yebhuruu inogona kumiswa kubva pane sarudzo uye izvi ndizvo chaizvo zvataizofunga dai tisina kuona.
Mufananidzo wepamoyo unonyangarika
Kana mushandisi akakudzivirira, mufananidzo wako unonyangarika kubva paWhatsApp uye WhatsApp Web / Desktop. Zviripachena kuti anogona kunge akabvisa, asi ini handioni kuti nei chero munhu angave achida kubvisa iyo pikicha kubva kuprofile yake yeWhatsApp. Ichi chingave chiri chiratidzo chiri pachena pane zvese.
Sezvaunoziva, WhatsApp Web ndiyo yewebhu vhezheni, inowanikwawo mune desktop desktop, iyo yatinogona kutaura nayo paWhatsApp, asi zvinoratidza izvo zvinoitika pane yedu smartphone, zvinoreva kuti hatigone kutaura paWhatsApp kana foni yedu isina kubatana kune imwecheteyo WiFi network sekomputa yedu. Kunge chero webhu vhezheni yechero mameseji ekunyorera, iyi sarudzo yakanyanya kushomeka pane yepamutemo application, asi iyo pikicha haina kuoneka futi.
Hapana nzira inogona kutivimbisa
Izvo zvakakosha kuti upedze nekutaura nezve iyi poindi zvakare. Kunyangwe zvichipesana nezvatiri kutsvaga mune ino posvo, WhatsApp ichaedza kuchengetedza zvakavanzika kana chishuwo chemushandisi anovhara kune wekubatana, ndosaka isingapi 100% nzira yakavimbika yekuziva kana ivo vakativharira. Ndicho chikonzero nei ndataurawo kuti inokundikana kubvumira cheki yekutanga uye kwete yechipiri, nekuti nekutumira meseji tinogona kuziva kuti haina kusvika uye totanga kufunga kuti kusangana kwedu hakudi kuziva chero chinhu nezvedu , zvirinani kubva paWhatsApp.
Saka, wakamboona here kuti mumwe munhu anogona kunge akakuvharira paWhatsApp? Unoziva imwe nzira yatinogona kusanganisira mune ino posvo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Kuziva sei kana ini ndavharirwa paWhatsApp
Kune imwezve inoshanda. Edza kuwedzera munhu iyeye kuboka, zvinokupa iko kukanganisa uye iwe unozoziva kuti ivo vakakuvharira.
Mhoro Ruben. Pandinogona, ndinozviedza uye ndinovimbisa kuwedzera kune iyo positi 😉
Chimwe chikamu chakakosha cheruzivo pamwe neyekupedzisira zuva rekubatanidza (iro vazhinji vakaremara) ndiyo mamiriro. Kazhinji munhu wese ane chinzvimbo uye shamwari dzake anogona kuzviona zvakanyanya. Haisi 100% yakavimbika asi inobatsira mukuita.
Chinja imwe tsananguro, zvese zvishandiso hazvidi kuve pane imwecheteyo netiweki yeWi-Fi, ini ndine yangu whatsapp pane yekare Samsung uye ndine whatspad yeIpad, imwe neimwe iine data yakazvimiririra yedhara. Uye batanidza nekungoverenga iyo QR kodhi. Iye zvino whatsapp inochengetera kubatana kwese kwauri kana ukaiudza kuti irambe iri mukati.
Kana cheki mbiri isingaoneke, asi ini ndichiri kuona pikicha, chinzvimbo, uye chekupedzisira kubatana ...?